Abasiki beMilling, iTephu yokuFonda imisonto, iSpot Weld Drill Bits-MSK
inyathelo drill amasuntswana
Amasuntswana e-Twist Drill
I-Chainsaw encinci yoMbane
Yenza izixhobo zokusika zeKlasi yokuqala kwihlabathi liphela.
Ngomatshini wokuSila we-Six Axis ophucukileyo kunye ne-Zoller Five Axis Cutting Tool Test Equipment engeniswe eJamani, iqela lobugcisa le-MSK (Tianjin) liya kuphendula kwisicelo sakho ngexesha elifutshane.
I-MSK (i-Tianjin) izibophelele ekuveliseni isixhobo se-CNC esiphezulu, esinobuchule nesisebenzayo: Abasiki be-Milling, i-drill bits, i-reamers, iitephu, i-cutter installers kunye nezixhobo ezizodwa.
ukubonelela abathengi bethu ngezisombululo ezibanzi eziphucula ukusebenza komatshini, ukwandisa imveliso, kunye nokunciphisa iindleko.Inkonzo + Umgangatho + wokuSebenza.
I-MSK (i-Tianjin) ithatha indlela ebonakalayo ekusebenziseni amanqanaba aphezulu obuchule bokusika isinyithi ukoyisa imingeni yabathengi.Ubudlelwane obakhelwe kwintembeko nentlonipho bubalulekile kwimpumelelo yethu.Sisebenza ngokusondeleyo nabathengi ukuqonda iimfuno zabo.
Yasekwa ngo-2015, i-MSK (Tianjin) Cutting Technology CO., LTD ikhule ngokuqhubekayo kwaye yadlula ukuqinisekiswa kwe-Rheinland ISO 9001.
Ngamaziko aseJamani e-SACCKE amaziko okugaya ama-axis amahlanu, i-German ZOLLER ye-6-axis isixhobo sokuhlola izixhobo, umatshini we-Taiwan PALMARY kunye nezinye izixhobo zokuvelisa zamazwe ngamazwe, sizimisele ukuvelisa isixhobo se-CNC esiphezulu, esinobuchule kunye nesisebenzayo.
Ukubuza malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye umyalezo apha kwaye siya kunxibelelana kwiiyure ezingama-24.
Iimveliso zethu zamva nje
Carbide 2-Blade End Mill Tungsten Cutting Milli...
I-single-edge flute end mill ye-aluminiyam
Intsimbi ye-Tungsten ephindwe kabini kwi-taper yebhola yomsiki e...
2 flutes ibhola impumlo isiphelo sokusila
ICarbide V Groove Chamfer Drill Bits yeAluminiya...
Inyathelo leTungsten Carbide Drill Bit
HSS 6542 Machine Spiral impompo
CNC ITungsten Drill Tool Metal Solid Carbide Cutting Bits Spot Chamfer Drilling Bit |Izixhobo ze-CNC
Yellow Nano Coating Round Corner End Mill |Carbide Bull Nose End Mill
MSK carbide milling cutter |Ukusebenza okuphezulu |lahla iitshiphusi ngokulula
DLC Coating Aluminium Milling Cutter
Ibhodi ye-PCB Drill Bit yeSekethe yeBhodi yokuDla amasuntswana e-CNC okuCwangcisa ukuShicilela iBhodi yeSekethe